Uyifaka njani i-watermark kwimifanekiso yethu | Iindaba zeGajethi
YUyazi ukuba kunokuba lula kangakanani kubo ukukopa nokuncamathisela amanqaku esiwapapashayo. Into efanayo iyenzeka ngemifanekiso kwaye inokongezwa oko xa ufumana umfanekiso kwiphepha Awunalo nofifi ukuba yenziwe ngumbhali wale ndawo okanye ukuba ikhutshelwe kwenye indawo. Ukuthintela oku, kungcono ukongeza i-watermark kwimifanekiso yethu. kwaye ubuncinci siya kuba nethuba lokubanga izingqinisiso xa sibona imifanekiso ipapashwe kwenye ibhlog okanye indawo.
Pokanye oko, kunye nokuqala uthotho lwezithuba ezinxulumene Izixhobo ndizisebenzisa kakhulu njengebhlogger, namhlanje siza kubona uyifaka njani i-watermark emfanekisweni kule ncwadana yenyathelo ngenyathelo.
PUkongeza i-watermark kufuneka sahlule Izigaba ezibini: la indalo yew watermark kunye ukufakwa kwebrendi kwimifanekiso ukuba sikhetha. Masiqale ngokwenza i-watermark (watermark ngesiNgesi).
NSiza kudinga isoftware yokuhlela imifanekiso. Ungasebenzisa Photoshop o Gimpkodwa kufanelekile nayiphi na inkqubo ekuvumela ukuba wenze umfanekiso onemvelaphi ebonakalayo. Ngamanye amagama, nayiphi na inkqubo ekuvumela ukuba wenze okanye usebenze imifanekiso enokwandiswa kwe-GIF okanye i-PNG iya kwanela. Ndicebisa okokugqibela ngalo msebenzi kwaye Ndiza kuqhubeka nokufundisa kusetyenziswa umfanekiso wePNG.
1) Vula umhleli wakho womfanekiso kwaye yenza umfanekiso onemvelaphi ebonakalayo Iiphikseli ezingama-380 ububanzi ngeepikseli ezingama-220 ukuphakama kunye nesisombululo se-300 dpi (pixel / intshi okanye ipikseli nge-intshi)
2) Ngoku sinako khetha ukujonga umfanekiso, isicatshulwa, okanye indibaniselwano yazo zombini. Ingcebiso yam kukuba usebenzise isicatshulwa kuba singcolisa ifoto encinci (ijongeka icocekile) kwaye Kulula ukuchonga i-url yombhali wemifanekiso (ke kuya kuba lula kubo ukuba bakutyelele bengakhange babone mfanekiso wakho ulapho). Ndiza kulandela ukufundisa ukongeza isicatshulwa, kodwa inkqubo iyafana ukuba uthatha isigqibo sokufaka umfanekiso njengewatch.
3) Khetha umhlophe (#ffffff) njenge umbala wombhalo kwaye ubhale, umzekelo, i-url yebhlog yakho kathathu njengakulo mfanekiso ulandelayo. Gcina ukhumbula ukuba kulo mfanekiso ndibeke umbala wombhalo ngombala omnyama ukuze uyiqonde kakuhle into ebhaliweyo, kodwa kufuneka usebenzise umbala omhlophe.
4) Unayo kuphela gcina umfanekiso owenziweyo kwifomathi yePNG. Khumbula ukuba ukuba uzama ukuyigcina kwifomathi yeJPG, imvelaphi ebonakalayo iya kuba mhlophe kwaye ayisayi kuphinda isetyenziselwe into esifuna ukuyenza.
Y Ngale ndlela siya kuba nayo watermark yethu wadala. Ngoku kufuneka sisebenzise inkqubo ukuyifaka kwimifanekiso.
PUkufaka i-watermark siya kusebenzisa isoftware yasimahla Isixhobo sokukhawulezisa iifoto zeStartStone evumela ukuba wenze imisebenzi emininzi kwimifanekiso yakho, ukusuka ekuguqukeni phakathi iifomati nokuba utshintshe ubungakanani bemifanekiso yakho okanye uyiqambe ngokutsha. Kwaye konke oku simahla.
Pukukhuphela Isixhobo sokukhawulezisa iifoto zeStartStone ungakhetha ukuyenza ukusuka ISoftonic okanye kwi Iphepha elisemthethweni le-FastStone. Okwangoku inguqulelo yamva nje iyi-2.4 kwaye yeyona ndiza kuyisebenzisa kufundiso.
Cukukhuphela inkqubo, cofa kabini kwifayile (ebizwa ngokuba yi "I-FSResizerSetup24.exe") kwaye uyifake. Inkqubo yofakelo ilula kakhulu, kuya kufuneka ucofe amatyeli aliqela ku «Okulandelayo>» kunye nenye into encinci. Xa uyifakile, cofa kunqumlo olwenziwe kwidesktop yakho ukuvula inkqubo kwaye singaqala inkqubo faka i-watermark yethu.
1) Into yokuqala kukujonga ibhokisi "Sebenzisa iinketho eziphambili" («Sebenzisa ukhetho oluphambili») kwaye ucofe kwiqhosha «Iinketho Eziphambili» ("Iinketho eziphambili").
2) Kwiwindow evulayo kufuneka ukhethe ithebhu yokugqibela apho ithi "Watermark". Emva koko kufuneka ujonge ibhokisi "Sebenzisa iWatermark" ("Sebenzisa i-watermark") kwaye emva koko kufuneka ucofe ku "Umfanekiso weWatermark" ("Imifanekiso yeWatermark") ukukhangela idiski enzima kwiwatch esiyenzileyo kwinyathelo elidlulileyo.
Cofa apha ukuze wandise umfanekiso-
3) I-watermark iya kubonakala embindini wesikrini. Ngoku kufuneka uvavanye amaxabiso ngokungafihli ("Ukungafihlisi") ofuna ukunika i-watermark kunye nezinye iziphumo ezinje "Umthunzi" ("Shadow") eyongeza isithunzi kuhlobo, "Imvelaphi" ("Imvelaphi") ethomalalisa ifuthe lewatch ngokuyibeka emva kwemifanekiso okanye "Umjikelo" ("Ujikeleze") ukuba inyani kukuba andinalwazi lokuba lolantoni for. Ndizijongile zonke ezi bhokisi kunye nexabiso lesi-7 elubala. Ngale ndlela, ibhalansi elungileyo ifezekisiwe phakathi kokushiya uphawu kumfanekiso kunye nokugcina ukucaca kwawo. Unokwenza iimvavanyo ezininzi de ube wanelisekile nge-watermark yakho. Xa ugqibile Cofa ku «Kulungile».
4) Ngoku sibuyele kwiscreen esikhulu, kufuneka ukhethe imifanekiso esifuna ukongeza kuyo i-watermark kwaye siqale inkqubo kodwa ngaphambi kokuba uqhubeke kufuneka uthathele ingqalelo into ebalulekileyo.
Ukuba ukhetha njengefolda yemveliso ("Ifolda yemveliso") ifolda efanayo nemifanekiso oza kuyisebenzisa uya kulahla ezokuqala kwaye uya kuba nemifanekiso eneewarkmark kuphela. Ngapha koko ukuba ujonga ibhokisi "Buza ngaphambi kokubhala ngaphezulu" ("Buza ngaphambi kokubhala ngaphezulu") inkqubo iya kuhlala ikubuza ngaphambi kokubhala ngaphezulu imifanekiso yoqobo.
Ukuba oku kucacile, khangela imifanekiso ofuna ukuyiguqula uyisebenzisa indawo ephawulwe 1 kumfanekiso olandelayo. Emva koko cofa ku "Yongeza" okanye "Yongeza konke" ukongeza imifanekiso nganye nganye okanye zonke ngaxeshanye. Imifanekiso eza kwenziwa ngobuqhetseba iya kuvela kwi indawo ephawulwe 2. Emva koko ukhethe ifolda yokukhupha ("Ifolda yemveliso") kwaye ekugqibeleni Cofa ku «Qala» ("Qala") ukuqala inkqubo.
Y ulungele ukuba unemifanekiso yakho kunye ne-watermark yakho efakiwe. Isixhobo sokukhawulezisa iifoto zeStartStone Unezinye iindlela ezininzi esinokuthi sizibone kwezinye iincwadi, okwangoku ndiyathemba ukuba oku kukuncedile. Imibuliso yeVinegary.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyifaka njani i-watermark kwimifanekiso yethu
kamsinya nje xa kuphuma elandelayo ndiza kuhlela yonke imifanekiso yam kwaye ndiyibeke kunye ne-watermark ... enkosi kakhulu 🙂
Molo… ukuba uyandivumela, ndiza kukushiyela eli khonkco picmarkr.com/index.php (ngaphandle kwe-www kuba iileya zindithumela ku-spamm)
Ndiyisebenzisa ... kulula kwaye iyakhawuleza 🙂
Enkosi ngesifundo esilula 🙂
Kwaye eliya lizimvo zingasentla likwayindlela elungileyo, ngakumbi kwabo bathanda ukwenza yonke into kwi-intanethi, njengam 😀
Ndinomdla, ewe mhlekazi 😉
Ukuba ndithe ndayeka ukukopa nokuncamathisela ndiza kusebenzisa i-P watermark
Kuhlala kulungile ukwazi ukuba ungayenza njani!
Javi, jonga amagqabantshintshi ezithuba zakudala.
Amagama ashiye ikhonkco kwiphepha elingekhoyo. Mhlawumbi yingxaki yokufuduka. Ayikuko ngenxa yamakhonkco ngokwawo, angenakulandelwa, kodwa ngenxa yokuba inokukuzisela ingxaki yeempazamo kwiinjini zokukhangela.
Neri enkosi ngegalelo kwaye uMariano sele elungisiwe, enkosi kakhulu ngencam. Imibuliso kubo bonke.
Hee iVinegar !!! I-currado kakhulu le ncwadana yemigaqo, jonga kuwe ngemfumba yemifanekiso yeencwadana endizipapashileyo ezingazange zenzeke kum. Enkosi ndoda!
Wamkelekile forat. Ndincoma kakhulu ukuba ubeke amanqaku kwimifanekiso yakho, yenziwe ngomzuzwana kwaye ndicinga ukuba iluncedo ngokwenene.
umbono olungileyo, khuphela yonke imifanekiso nge-ftp, sebenzisa i-watermark kubo kwaye uyilayishe kwakhona kwi-XD
nymphetamine wahlaziswa yimifanekiso 😉
jus ... Ndingathanda ukufunda kwi-photoshop ... Ndicinga ukuba ndiyazi indlela yokwenza i-PNG, konke okunye kunokuba lula ... masibone ukuba emva kweemviwo ...
Ndiwalandele onke amanyathelo okufaka i-watermark kunye nemifanekiso yenziwe kodwa umzekelo i-digimarc ye-photoshop ithi ayinazo ii-watermark. Njengoko sizifunda kamva iVinegar, uxolo, ngokuqinisekileyo iya kuba ngamampunge mhlawumbi, imibuliso,
Ndinombuzo ukuba umntu unolwazi ngakumbi
I-FastStone Photo Resizer Ndingathanda ukuba undinike isandla.Umbuzo wam ngowokuba umgangatho wemifanekiso yam enesoftware inokubuyiselwa kubungakanani bayo bokuqala, ukuba umntu unesifundo, ndingavuya ukuba usipapasha.
UMiguel Morales obambe umfanekiso sitsho
Ulwazi lwakho beluncedo kum
Phendula uMiguel Morales
Isifundo esihle kakhulu, esilula kunye ngqo, siyavuyisana.
Indoda ndiyayithanda ndikhangela ixesha elide ukuba ndikwazi ukuyenza loo nto, kuba ayiqali ngefotoshop kwaye ndibenzele iifoto ezininzi abahlobo bam kodwa ndibona ukuba benze njalo, kulungile, ndakhangela indlela yokubeka i-watermark kuyo kwaye ndinendlela i-500 kunye ne-1 x 1 enesithukuthezi ngayo kodwa oku kulula kakhulu kwisigidi enkosi
Ndiyabulela kakhulu, ibe luncedo kakhulu
UPablo Hernan Silvestri sitsho
Sa nisayo ..
Kwaye kuthiwani ngemifanekiso ene-predominance ecacileyo ... Oko kukuthi, akukho mahluko ungakanani newatermark? Uyisombulula njani? okanye kufuneka udlale ngokungafihli kwifoto nganye?
Phendula Pablo Hernan Silvestri
Elf ngokwakho - yiba y-elf kwaye ujike abahlobo bakho babe zii-elves